IXiaomi Mi 9T Pro ifika nge-20 ka-Agasti eYurophu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Xiaomi Mi 9T Pro sele inomhla wokumiliselwa kwayo eYurophu
Kwiiveki ezidlulileyo ukumiliselwa kweXiaomi Mi 9T Pro kulindeleke eYurophu, inyaniso kwathiwa akazobuya kudala. Njengoko sele uyazi, le modeli ligama lamanye amazwe iRedmi K20 Pro yohlobo lwesiTshayina. Imodeli eqhelekileyo, iRedmi K20, sele isungulwe kwilizwe jikelele, Ngapha koko sinokuyithenga eSpain, kodwa akukho nto yayisaziwa malunga nokuqaliswa kwemodeli yePro.
Ekugqibeleni, emva kweeveki ngamahemuhemu, uphawu lwalo uqobo yazisa ngokusungulwa kweXiaomi Mi 9T Pro eYurophu. Ingcezu yeendaba eziza emva amaxabiso efowuni eYurophu sele avuza. Iindaba ezimnandi zezokuba ukulinda kufutshane kakhulu malunga noku.
Ngokwenkampani uqobo, ibhengeze kwinethiwekhi, kwayel Xiaomi Mi 9T Pro ifika eYurophu ngo-Agasti 20. Ngaphantsi kweveki elinde ukuba isiphelo esitsha siphakamise ngokusesikweni. Ngokuqinisekileyo baya kuququzelela umsitho omncinci wokubonisa, apho iinkcukacha zokwaziswa (imihla kunye namaxabiso) ziya kutyhilwa.
Ibiliphepha lophawu lwesiTshayina eHolland olubeke lo mfanekiso, lubhengeza ukufika komnxeba. Ke sisiqinisekiso sokuba abaninzi balindile ixesha elide. Kuba ziiveki oko Kukho amarhe malunga nokusungulwa kwale modeli eYurophu, kodwa ngaphandle uphawu uthethe nto.
Ngoko ke, Nge-20 ka-Agasti siza kuyazi yonke into ngale Xiaomi Mi 9T Pro kunye nokuqaliswa kwayo eYurophu. Njengoko ubona kwinkcazo yayoUluhlu oluphezulu kakhulu, oluza kuza nexabiso eliphantsi kakhulu kuluhlu lwayo, enye yeemeko ezingathandabuzekiyo ezinokukunceda ukuba ube neziphumo ezilungileyo kwintengiso.
Siza kuzimamela ezi ntsuku zizayo kwiindaba ekusungulweni kweXiaomi Mi 9T Pro, ukuba kunokwenzeka kubekho iinkcukacha ezintsha. Ngaphandle koko, nge-20 ka-Agasti siza kuba kulo msitho kwaye siya kuyazi yonke into malunga nokuba esi siphelo sitsha siza kusishiya ngantoni, ngakumbi ngokwexabiso kunye nomhla wokuqaliswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi Mi 9T Pro sele inomhla wokumiliselwa kwayo eYurophu
I-HTC Wildfire X: Ifowuni entsha kraca
I-EaseUS MobiSaver ye-Android kwi-50% isaphulelo, ibuyisa idatha esusiweyo